ကမ္ဘာပေါ်က ဒီဇိုင်းအဆန်းဆုံး အဆောက်အဦးများ - Thutazone
ကမ္ဘာပေါ်က ဒီဇိုင်းအဆန်းဆုံး အဆောက်အဦးများ
ရေးသားသူ – Florist (Living Fashion Magazine)
(၁) ပေါ်တူဂီက ကျောက်တုံးအိမ်
မီးခတ်ကျောက်နဲ့ ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကျောက်ကို အသုံးပြု တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပေါ်တူဂီက ကျောက်တုံးအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်လက်ရာမြောက်တဲ့ ပိသုကာ ဆရာကြီးများက မကြာခဏ လာရောက် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဂျာမန်လူရိုင်းများရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ဖို့ အိမ်ကို ကျောက်တုံးတွေကြား လုံလုံခြုံခြုံ လက်စွမ်းပြ တည်ဆောက် သိမ်းဆည်း ထုဆစ်ထားဟန်ရှိတယ်။ ကျည်ဆန်တွေရဲ့ ဒါဏ်က ခံနိုင်ရည်ရှိစေတဲ့ ပြတင်းတံခါးတွေရယ် ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ စတီး လူဝင်တံခါးတွေရယ် ပါရှိနေပြန်တယ်။
အထဲမှာ ငုံထားတဲ့ လူနေအိမ်ကလေးက လှပသေသပ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ်။သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ်။ မီးဖိုနေရာနဲ့ အခြားလိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလည်းပါရှိတယ်။ မယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲ။ အိမ်ကလေးကခေတ်နှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသော်လည်း ကျောက်ခေတ်စတိုင် ပုံစံကလေးကို မပျက်ယွင်းစေခဲ့ဘူး ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံက ဒန်းစင်း ဘစ်လ်ဒင်း ကနေတဲ့ အဆောက်အဦ ဆိုပါလား။ဘယ်လိုပါလိမ့်။ သူ့ကို ဒန်းစင်းဘစ်လ်ဒင်း လို့ အများက ခေါ်ဝေါ်နေကြပေမဲ့ တကယ်က “ၤFred and Ginger”လို့ ခေါ်တာပါ။ တည်ရှိတဲ့နေရာက ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ပရတ်မြို့မှာပါ။ ဗိသုကာဆရာတွေရဲ့ အံ့သြဖွယ် အထူးပြုလုပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ဆန်ပြီး ကျက်သရေ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေပါသတဲ့။
တစ်ခုကို တစ်ခု မှီခို ကပ်ယပ်နေပုံ ထူးဆန်းတာကြောင့် ကကြိုးကကွက်တခုလို ယိမ်းနွဲ့နေဟန်ရှိတယ်လို့ မြင်နေကြပါတယ် တဲ့။ ဒီဇိုင်းရှင်က တော့ Vlado Milunic ဖြစ်ပြီး Frank Gehryနှင့် ပူးတွဲ တီထွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူ့စတိုင်က အံ့သြဖွယ်မကောင်းပါလား။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတတခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ လူတိုင်းက လက်ဖျားခါရတဲ့ အဆောက်အဦ ပေါ့။
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာက အဆောက်အဦးပါ။ လာပီထရီရာ ဒါမှမဟုတ် ကာဆာမီလာအဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းဆရာက အန်တိုနီဂူဒီ ဖြစ်ပါတယ်။သူက စိတ်ကူးခပ်ယဉ်ယဉ်ရယ်။ဒီအဆောက်အဦကို မင်္ဂလာ သတို့ သမီး သတို့သားများအတွက် အထူးတလည် စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်ကတော့ အကျသား။ ကမ္ဘာတလွှားက ခရီးသွားဧည့်သည်များ တမေ့တမော တအံတသြ ငေးကြ့ည်ကြရပါသတဲ့။ အထူးပြောင်မြောက်လှတဲ့ လက်ရာများပါပဲ။
4. Forest Spiral – Hundertwasser Building, Germany
ဂျာမဏီ နိုင်ငံက Hundertwasser Building ပါ။တခုနဲ့တခု လိမ်ကျစ်ပတ်ရစ်ချိတ်ဆက် ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Forest Spiral လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။နွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။စမတ်လည်းကျတယ်။ဒီဇိုင်းနာ Friedensreich Hundertwasser ဟာ အနုသုခုမဆရာစစ်စစ် ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ပြောင်မြောက်ဆန်းသစ်တဲ့ လက်ရာတွေကို တီထွင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဗိသုကာ ဆရာကြီးများပါပဲ။
5. Cathedral of Brasilia, Brazil
ဘရာဇီးနိုင်ငံက ဘုရားကျောင်းပါ။ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးစီရင်စု နယ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိပြီး ဒီဇိုင်းဆရာ အော်စကာ နီမီယာရဲ့ ခန်းနားသိုက်မြိုက် ထယ်ဝါလွန်းတဲ့ အံ့ဖွယ် အဆောက်အဦးပါ။မီးအလင်းပေးမှု အကွက်စေ့ပြီး လူတိုင်းအမြင်မှာ တင့်တယ်လှပခြင်းရှိသတဲ့။
6. National Centre for the Performing Arts, China
ဒါက တရုတ်ပြည်က ပါဖောမင့်များပြသရာ နေရှင်နယ်စင်တာ တဲ့။ NCPAပါ။ ၆နှစ်လုံးလုံး အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါ။၂၀၀၁မှာ တည်ဆောက်ခဲံပြီး ၂၀၀၇မှ ပြီးစီးခဲ့တယ်။ ဒီပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သူက ပေါ အင်ထရူး ပါတဲ့။ သာမန် ရှိရိုးရှိစဉ်ထက် ပိုမို လွန်ကဲတဲ့ ဥသဏ္ဍာန် အဆောက်အဦပါ။ လူတို့ပြုပြင် ဖန်တီးထားတဲ့ ရေကန် တစ်ခုနှယ် တိုက်တယ်နီယန် နှင့် ဖန်သားတို့ကို ရောနှောဆက်စပ် တည်ဆောက်ထားတယ် ။ တကယ့် အံ့ဖွယ်ပါပဲ။
Florist (Living Fashion Magazine)
My-World Phyo Phyo Blog